Ngamanye amaxesha ngamnye wethu usebunzima, ukuphuma ngaphandle ngaphandle kunceda kunzima okanye akunakwenzeka. Sifanele sicele uncedo kulowo nalowo wethu, ngamanye amaxesha isisicelo sokubonisa indlela, ngamanye amaxesha isicelo sokunceda into enzulu. Iingcali zengqondo zihlala zilukhuni ukujongana nezicelo kubantu abangaziwayo, abaninzi banqwenela ukuhlangabezana nazo, nangona ukuba iinzame zabo zithweswe ngempumelelo. Sinamahloni, asifuni ukucingelwa kakubi, sinoyika. Enyanisweni, isicelo sokuncedwa asikho isizathu sokuvalelwa, ngenxa yokuba kwiimeko ezininzi abantu bazimisele ukuncedana ubuncinane ngeengcebiso. Kufuneka nje ukwazi ukubuza ngokuchanekileyo.
Ziziphi iimeko kufuneka ndifune uncedo?
Ngokuqinisekileyo uqaphele ukuba ukucela uncedo ngamanye amaxesha kunokubamba iqhaza elisebenzayo kwiingxaki zomntu womnye umntu, kwaye ngamanye amaxesha kubangela ukucasuka. Into kukuba abantu bathanda ukuncedana, kodwa bakwenza ngokuphindaphindiweyo ukuzonwabisa kwabo kunomnye umntu. Imvakalelo evuyokayo xa umntu enceda omnye, unokuthelekiswa nemvakalelo ekudaleni into ebalulekileyo kunye nengqiqo. Nangona kunjalo, xa umgudu osetshenziselwa uncedo lukhulu kakhulu, u lonwabe luhlala luphazamiseka. Ukongezelela, abantu abayithandi abantu abacebileyo kwaye banqabile ukuba bancede abo banokwenza ininzi yomsebenzi ngokwabo okanye ubuncinane ngandlela-thile bafikelele kwisisombululo kwingxaki ngemizamo yabo.
Funa uncedo xa ulungele ukuzinceda.
Ngubani ofuna ukucela uncedo?
Nokuba isicelo esilula kuncedo asinakuxhamla nabo bonke abantu, kwaye oku kuqhelekileyo. Abantu bahluke kakhulu, bachukunyiswa ngezinto ezahlukeneyo, ngoko ingxaki yomntu omnye ingabonakala ngathi ingengxaki, kodwa umntu uya kuyanzela ukuba aphendule.
Ngoko, qalisa kuluphi uhlobo loncedo oluyidingayo. Umzekelo, ukucela imali kulabo abasemgangathweni efana neyakho, akukho ndawo. Buza indlela yeendwendwe - nayo. Musa ukucebisa iingcebiso kubantu abangekho ingxaki yakho.
Khawucinge ngeso simo esinzima: unguye yedwa kwisixeko esingaqhelekanga okanye ingxaki yakho ibaluleke kakhulu kangangokuba imizamo yabantu abasondeleyo ayaneleyo, kwaye isigqibo siyadingeka ngexesha elifutshane. Isicelo sokunceda yindlela ekhoyo kuphela. Ukuze impendulo yakho iphendule, kufuneka uqikelele ngokuchanekileyo umyalelo wezenzo eziza kubangela impendulo enkulu. Ndimele ndithi abagxeki kunye nalabo abafuna ukuhlala ngeendleko zabanye, kuya kuba nzima kakhulu ukukholisa abanye kwiinyani zabo iingxaki.
Okokuqala, kuyimfuneko ukunquma ukuba ingxaki yakho inkulu kangangokuba ufuna uncedo kubantu abangabaziyo. Kukho abantu abanovalo ngenxa yeso sizathu, okubathintela ukuba bafumane uncedo olwaneleyo xa kukho inkathazo yangempela. Emva koko cinga ngoobani onokukunceda. Ngokomzekelo, abantu baninzi bafuna uncedo xa befuna iimali zokuziphathela ngokwabo okanye abantwana. Kwiimeko ezinjalo, abantu abanxibelelwano kwicandelo lempilo kunye nabaxhasi bafunekayo. Ukutsala ingqalelo kwingxaki yakho, nayiphi na imaphephandaba-ndaba, i-intanethi, ithelevishini - ifanelekile. Ukuba udinga uncedo lohlobo oluthile, ukhangele indawo kwindawo apho abantu abanokukwazi ngayo umbuzo wakho - oku kuya kwandisa amathuba okuphumelela.
Kubalulekile ukuba ukwazi ukucacisa ngokucacileyo nangokucacileyo intsingiselo yenkinga. Ngokusoloko bezama ukuchaza imeko yabo ngokubanzi, abantu baqala ngeenkcazelo ezide zobomi babo, eziphazamisa ingqalelo kumbuzo oyintloko. Yiba yinto ecacileyo kakhulu, nokuba ngaba ufuna nje ukukhanya. Kwakhona, musa ukulibala malunga nobungqina. Ngoku amaninzi abagxeki badlala kwiimvakalelo zabantu, kuba abantu abambalwa bakholelwa kwiintengiso zentengiso. Ingxaki enkulu ngakumbi - ingqina elifanelekileyo kukuba ubungqina bokuba ungumntu wokwenene kwaye ufuna uncedo ngokwenene.
Futhi ungakulibali ukuba kwindawo yokuqala kufuneka uzincede. Ngokuqinisekileyo, unokuzibuza ukuba yintoni oyenzile kakade ukuze utshintshe imeko ukuba ibe ngcono. Ukuba kuvela ukuba uhleli khona, ulinde ummangaliso, ngoko akunakwenzeka ukuba umntu unokukunceda.
Ngaphezu kwakho konke, ungaba neentloni ngokucela uncedo, kuba kwimiba enzima kuthi ngamnye kuthi angabikho, akukho mntu ukhuselwe kulo. Kodwa wena awudluli ngabo bafuna, kuba isicelo sabo sosizo sinokuba nethuba lokugqibela lokusinda. Ewe, oku akuthethi ukuba kufuneka ukhawuleze ukunceda bonke abantu obunzima, kodwa ukuba ubona ukuba umntu unenkxwaleko, ungadlulanga. Ngolunye usuku, mhlawumbi, uya kufuna imfesane yomntu.
Umtshato ongalingani - umntu usemncinci
Yintoni esiza kuthetha ngayo ngathi ngathi
Ukuba ubuza umntu ixesha elide, uya kunika imvume
Umntu kunye namalungelo okubhala ngesandla
Ngaba ubungqina bentombi buyingqina okanye inyaniso?
Ngubani na umninindlu?
Yenza isikhumba esikhanyisiweyo
Inombolo yeNdlu ngefeng shui
Iresiphi yokupheka ngesidlo sothando
Isiqhumiso, isiqhumiso, imbali yemimoya, iingcaphuno kunye namazwi ngemimoya
Indlela yokwenza iityshini zemfundo zabantwana ngezandla zabo
I-Cottage shies soufflé kunye nobhontshisi obuluhlaza
Iimfayili kunye ne-sinamoni kunye ne-coffee icing
Ingulube eneembotyi kunye neetatayi
UAgata Mutseniets waphosa uPavel Priblucniy ngenxa kaDmitry Nagiyev
Ulibale intukuthelo, iingcebiso zengqondo yengqondo
Oogqirha babika ukuba uKsenia Sobchak ulindele intombazana
Ukunciphisa umzimba ngaphandle kokulimala kwimpilo
Sibone konke: i-swimsuit entsha u-Anastasia Volochkova ayifuni nantoni na, ifoto
I-Haircuts VIDAL SASSOON / VIDAL SASSOON C (2007) iDVD
Isaladi ye-Broccoli kunye neerinki kunye nembewu